Imibhalo nge Katarzyna Banasik
I-Voucherify iyisofthiwe ye-API yokuqala Yokuphromotha Nokuphathwa Kobuqotho esiza ukuqalisa, ukuphatha, nokulandelela imikhankaso yokuphromotha yomuntu siqu njengamakhuphoni esaphulelo, amaphromoshini azenzakalelayo, amakhadi esipho, ama-sweepstake, izinhlelo zokwethembeka, nezinhlelo zokudlulisela. Amaphromoshini womuntu siqu, amakhadi esipho, izipho, ukwethembeka, noma izinhlelo zokudlulisela zibaluleke kakhulu ezigabeni zokuqala zokukhula. Abaqalayo bavamise ukulwa nokutholwa kwamakhasimende, lapho ukwethula amakhuphoni esaphulelo omuntu siqu, ukukhushulwa kwezinqola noma amakhadi esipho kungabaluleka ekuheheni amakhasimende amasha. Ngaphezu kwe-79% yase-US
NgoLwesine, Januwari 21, 2021 NgoLwesine, Januwari 21, 2021 Katarzyna Banasik
Ngemuva kokuthengiswa kweBlack Friday, ukuthengwa kokhisimusi nokuthengisa ngemuva kukaKhisimusi sizithola sisenkathini yokuthengisa eyisicefe kakhulu onyakeni futhi - kuyabanda, kuyimpunga, kuyana futhi kuyakhithika. Abantu bahleli emakhaya, kunokuba bazulazule ezitolo ezinkulu. Ucwaningo lwango-2010 olwenziwe ngusomnotho, uKyle B. Murray, luveze ukuthi ukukhanya elangeni kungakhuphula ukusetshenziswa kanye namathuba okusebenzisa. Ngokufanayo, uma kunamafu futhi kubanda, amathuba ethu okusebenzisa imali ancipha. Ngaphezu kwalokho, ku